Myanmar court rejects appeal of jailed Reuters' reporters - Worldnews.com
Myanmar court rejects appeal of jailed Reuters' reporters
Bangkok, January 11, 2019--A Myanmar court upheld today the conviction of Reuters news agency reporters Wa Lone and Kyaw Soe Oo, both of whom are serving seven year sentences for violating the Official Secrets Act, Reuters reported. ...
A court in Myanmar has rejected the appeal of two Reuters journalists convicted of violating the country's Official Secrets Act, and maintained the seven-year prison terms...
သွန်းဆက် နဲ့ ညီထွဋ်ခေါင် တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့ အချစ်ရေး အခွီး
MC အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်
မြန်မာမလေးနဲ့ ချစ်သူ ဖြစ်နေတာ (၉) လ ရှိပြီ ဆိုတဲ့ မစ်ကီ
म्यांमार सबसे खतरनाक देश // Myanmaracountry where
ဘေဘီ ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ မြင်ကတည်းက စကြွေခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သားဂန်း
ခင်လှိုင် ၏ သမီး သဇင်ထူးမြင့် ရဲ့ အသက် (၁၉) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ
\_"မောင်နှမတွေလို ခင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ။ သူ့ရည်းစားရတိုင်း မိတ်ဆက်ပေးတယ်.. ပြတ်သွားတဲ့ အခါကျတော့ မခေါ်ဖို့၊ Facebook မှာပါ Block လိုက်ဖို့ ပြောတယ်\_" လို့ သူငယ်ချင်း သွန်းဆက် ရဲ့ အချစ်ရေး အကြောင်း ပြောလာတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင် ရဲ့ အခွီး Myanmar Celebrity Update: Actor Nyi Htut Khaung reacts on Thun Sett\_'s Relationship #NyiHtutKhaung #ThunSett...
ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း...... 1. ခန့်စည်သူ၊ ညီထွဋ်ခေါင်၊ ခိုင်သင်းကြည်၊ သွန်းဆက်၊ဆုအိမ့်စံ တို့ရဲ့ ”သရဲသင်္ဘော\_" 2. ( ၄၅ ) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ မှာ မိခင်ကို ငွေကျပ် သိန်း (၁၀၀) ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင် 3. (၂၀၁၈) မှာ စီးပွားရေးကောင်းပြီး အချစ်ရေး ကံမကောင်းခဲ့တဲ့ မမသင်ဇာ 4. ချစ်သူဟောင်း သူထူးစံ နဲ့ သူငယ်ချင်းလို ဆက်ခင်မယ့် ခွန်းဆင့်နေခြည် 5. နိုင်ငံတကာကို ထိုးဖောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကယန်း အမျိုးသမီး လက်ဝှေ့မယ် Veronica နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ အနုပညာသတင်းများ စုစည်း တင်ဆက်မှု။ Myanmar Celebrity Daily News: #ThinzarWintKyaw #KhunSintNayChi #ThunSett #NyiHtutKhaung #KhineThinKyi #KhantSiThu #MyanmarCelebrityNews...
\_"လိမ္မာတဲ့ ဒီလို ချစ်သူမိန်းကလေးကို ဂျာမနီမှာ ရှာလို့ မတွေ့ဘူး။ ချစ်သူသက်တမ်း (၉) လရှိပြီ။ ချစ်သူရဲ့ ဦးလေးက မေးတယ်။ သူ့သမီးကို တကယ်ချစ်လားတဲ့\_" လို့ ပြောလာတဲ့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် Mikis Weber တို့ ချစ်သူနှစ်ဦး နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Singer/ Actress Mikis Weber from Germany talks about his Myanmar Girlfriend.. #MikisWeber #CelebrityCouple...
\_"ချစ်သူမွေးနေ့ရယ်၊ အင်တာဗျူးဖြေတာနဲ့ ကြုံသွားပြီး နှစ်ယောက်သား ပူးတွဲချန်ပီယံဖြစ်နေတယ်။ မွေးနေ့မှာ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုချစ်ဖို့ လက်ဆောင်တောင်းတယ်\_" လို့ ပြောလာတဲ့ အဆိုတော် သားဂန်း နဲ့ သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင် တို့ ချစ်သူနှစ်ဦး နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Tharr Gan & Baby Maung talk about their relationship.. #TharrGan #BabyMaung #CelebrityCouple...
သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင် ၏ သမီးလေး သဇင်ထူးမြင့် ရဲ့ အသက် (၁၉) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ အဖြစ် ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန် ၊ သုဝဏ္ဏမြို့နယ်၊ ပေါ်ဆန်းမွှေး (၁) လမ်းရှိ လမ်းသူ ၊ လမ်းသားများ အတွက် ဒံပေါက် နှင့် ရေခဲမုန့် စတုဒီသာ ကျွေးမွေး လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ Myanmar Celebrity Update: Well-known Actor & Comedian, Khin Hlaing\_'s daughter, Thazin Htoo Myint\_'s Birthday Donations. #KhinHlaing #ThazinHtooMyint...
\_"မောင်နှမတွေလို ခင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ။ သူ့ရည်းစားရတိုင်း မိတ်ဆက်ပေးတယ်.. ပြတ်သွားတဲ့ အခါကျတော့ မခေါ်ဖို့၊ Facebook မှာပါ Block လိုက်ဖို့ ပြောတယ်\_" လို့ သူငယ်ချင်း သွန်းဆက် ရဲ့ အချစ်ရေး အကြောင်း ပြောလာတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင် ရဲ့ အခွီး Myanmar Celebrity Update: Actor Nyi Htut Khaung reacts on Thun Sett\_'s Re
ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း...... 1. ခန့်စည်သူ၊ ညီထွဋ်ခေါင်၊ ခိုင်သင်းကြည်၊ သွန်းဆက်၊ဆုအိမ့်စံ တို့ရဲ့ ”သရဲသင်္ဘော\_" 2. ( ၄၅ ) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ မှာ မိခင်ကို ငွေကျပ် သိန်း (၁၀၀) ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင် 3. (၂၀၁၈) မှာ စီးပွားရေးကောင်းပြီး အချစ်ရေး ကံမကောင်းခဲ့တဲ့ မမသ
\_"လိမ္မာတဲ့ ဒီလို ချစ်သူမိန်းကလေးကို ဂျာမနီမှာ ရှာလို့ မတွေ့ဘူး။ ချစ်သူသက်တမ်း (၉) လရှိပြီ။ ချစ်သူရဲ့ ဦးလေးက မေးတယ်။ သူ့သမီးကို တကယ်ချစ်လားတဲ့\_" လို့ ပြောလာတဲ့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် Mikis Weber တို့ ချစ်သူနှစ်ဦး နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Singer/ Actress Mikis Weber from Germany talks abo
\_"ချစ်သူမွေးနေ့ရယ်၊ အင်တာဗျူးဖြေတာနဲ့ ကြုံသွားပြီး နှစ်ယောက်သား ပူးတွဲချန်ပီယံဖြစ်နေတယ်။ မွေးနေ့မှာ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုချစ်ဖို့ လက်ဆောင်တောင်းတယ်\_" လို့ ပြောလာတဲ့ အဆိုတော် သားဂန်း နဲ့ သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင် တို့ ချစ်သူနှစ်ဦး နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Tharr Gan & Baby Maung talk about t
သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင် ၏ သမီးလေး သဇင်ထူးမြင့် ရဲ့ အသက် (၁၉) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ အဖြစ် ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန် ၊ သုဝဏ္ဏမြို့နယ်၊ ပေါ်ဆန်းမွှေး (၁) လမ်းရှိ လမ်းသူ ၊ လမ်းသားများ အတွက် ဒံပေါက် နှင့် ရေခဲမုန့် စတုဒီသာ ကျွေးမွေး လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ Myanmar Celebrity Update: Well-known Actor & Com